yaqaano The Qurxiyey midabka bilaabmaa marka iftiinka ku dhufan shiraac ah ee unugyada dareenka xidh buuxiyey xagga dambe ee isha.
kooniska Kuwani iyo qataarradeedii, maadaama ay yihiin sida caadiga ah loo yaqaan, dab duufaan weyn oo falalkooda dareemayaasha ee Cape Verde ay iftiinka, taas oo markaa ka tagaa hoos dareemaha iftiinka xarumaha sawir maskaxda ku.
dhengedihii asal ahaan waa receptors madow iyo caddaan; receptors kuwan sawir astaamaha abid-beddelo ah Nuur iyo gudcur in indhahayaga hortooda yihiin.
Kooniska asal ahaan ka mas'uul ah layaabna muujinta midabka yihiin.
loo yaqaano The asal ahaan ku yimaadaan noocyo i.e. cagaaran, buluug iyo casaan.
Iftiinka cas dhiiri ee loo yaqaano cas iyo hada uu hakiyo ee loo yaqaano cagaaran ku xeeran.
Iftiin cagaar ah ma soo horjeeda saxda ah. Sidoo kale, nuurka buluug wuxuu kobciyaa ka loo yaqaano buluug iyo joojinaya labada yaqaano cas iyo cagaar.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah colorblindness, laakiin kuwa ugu badan waa colorblindness casaan-cagaaran.
The sightlessness midabka casaan-cagaaran saamaysaa sida dhowr ah sida 1 ka mid ah 30 dadka.
dadkan oo dhan ka mid ah oo aan haysan yaqaano cagaaran ama loo yaqaano cas. The yaqaano cagaaran waxaa loo yaqaan deuteranopia iyo casaan loo yaqaano waxaa lagu magacaabaa protanopia.
Ay dhibaatadu ka colorblindness?
Colorblindness asal ahaan waa dhibaato dhaxlay. The indho midab casaan-cagaaran waa xaalad recessive on koromosoom X kala dhex maray.
Kiiskan, kaliya hal hiddo-aragga hadh xoog leh ayaa loo baahan yahay si ay u siiyaan aragti midabka.
Sida wiilasha leeyihiin kaliya hal koromosoom X, sidaas awgeed waa wax badan ka sahlan oo fudud si ay u indha midabka.
Laakiin haddii ay dhacdo haddii hooyooyinkood yihiin sidayaal De markaas carruurtooduna waxay leeyihiin 50 fursad boqolkiiba isagoo shardiga ah.
Sida caadiga ah, indho midabka casaan-cagaaran dhacdaa oo ku saabsan 8 si ay u 10 Boqolkiiba ragga American ah.
Kuwani waa baaritaano kala duwan oo lagu sameeyo si loo ogaado dhibaatada gebi ahaanba.
The qiimaynta sightlessness midabka Ishihara waxaa ku dhowaad inta badan la isticmaalo falanqaynta si ay u tijaabiso midabada yarida.
Waxaa jira nooc duwana heli karo kuwaas oo si joogta ah loo isticmaalo askari bilays ah, pilot oo la askariyeeyay kale shaqo halkaas oo midabada waa weyn yahay ee looga baahan yahay.
Sababtoo ah amar this, inta badan dadka colorblind raadinayso hab ku habboon si ay u awoodaan in ay ka gudubto imtixaanka sida.
laakiin nasiib daro, ma jiro hab kasta oo dhamaystiran in ay ka gudbaan dhib this. In si ay u la tacaali, qof ka iibsan kartaa qaar ka isbarteen midabka saxo.
Laakiin waxaa inta badan waa ka mamnuuc in ay u isticmaashaa imtixaanada.
anomaloscope An asal ahaan waa aalad kaasi oo loo adeegsaday in lagu cabbiro khilaafaadyada tayo iyo tiro ahaanba ku toosan midabka.
Mid ka mid ah qaadan kartaa imtixaanka indho midab iyadoo la kaashanayo anomaloscope ah undemanding iyo fudud.
In inta badan kiisaska, muuqasho midabka dadka yari leeyihiin ka dhaxleen in la kordhiyo aragti habeen iyo xaaladaha qaar ka mid ah.
Isticmaal imtixaanka Vision. Waxay qaadan doontaa oo kaliya seconds iyo waxaad ka heli doontaa in aad tahay colorblind ama ma.
Haddii aad jiran tahay oo daal ah oo aan awoodin in ay arkaan midabka oo dhan, ha ka welwelin maxaa yeelay, Vision will help you see all the colors.